Indlela umama ayegula ngayo, nendlela intsapho yethu yasinda ngayo
Ndandineminyaka emihlanu xa umama wagula kakhulu. Waya kwelinye ilizwe iintsuku ezimbalwa ukutyelela izalamane, waza wabuyela ekhaya emva kweenyanga ezimbalwa ... Kakade, andikhumbuli iinkcukacha ezininzi, ngenxa yobudala, kodwa ndiya kukhumbula iimvakalelo zam kwiinyanga ezinzima.
Iifowuni zefowuni ngelo xesha zazingekho, ngoko iindaba zokuthi umama wangena kakubi kuthi emva kweentsuku ezimbalwa emva kokuhamba kwakhe. Bambiza ngathi zihlobo eziya kuye. Kwaxelwa ukuba umama wayegula kwisitimela, kwaye xa efika kwisikhululo wasuswa ngoko nangoko kwi-ambulensi esibhedlele. Wathwala zonke iimvavanyo ezifunekayo kunye nokusetyenziswa. Sifumene ukuba: i-pyelonephritis enzima, kwaye kwimeko ephosakeleyo, ekubeni ixesha elidlulileyo lidlulileyo kubonakala iimpawu zokuqala. Ukupheliswa koogqirha: ukuhlinzwa kuyimfuneko. Apho wayekho, kwakungenakukwazi ukwenza lo msebenzi ngokubhekiselele kumaxwebhu. Ngoko ke, emva kwexesha elithile, oogqirha banquma ukuthutha umama eMoscow. Kodwa ubawo kunye nezihlobo zethu babefuna ukuba umama abuyele ekhaya lethu, apho sinaye kunye naye kwaye simnike lonke uncedo kunye nenkxaso efunekayo. Oogqirha eMoscow banqatshelwe, bephikisana ngenxa yokwenqaba kwabo ngokuthi umama wabo akanakuze aphile kwelinye ihambo, kwaye loo msebenzi kufuneka yenziwe ngokukhawuleza. Kodwa ubawo, esengozini yakhe kunye nomngcipheko, usenqume ukuhamba ukumthabatha. Ngoku, ukucinga ngako, ndiyayiqonda ukuba le yilona sigqibo esona sichanekileyo, ebenokuthi samkele kuphela, kuba ukuba umama wahlala eMoscow kwaye emva kokungasebenzi kwakhe, ndingeke ndikwazi ukumbona ubuncinane maxesha ...
Umsebenzi wawude kwaye unzima. Ukubuyiselwa kwempilo kuthatha ixesha elide kunzima. Umama wachitha ixesha elide kwiyunithi yonyango enzulu, akukho mntu wavunyelwa ukuba aye kuye, umngcipheko wokufa wawukhulu kakhulu. Ekugqibeleni, xa edluliselwa kwiwadi, uyise wambona waza wambiza. Akabambezeli ngenxa yokulangazelela okanye ukulindela okude kwintlanganiso, kungekhona ekuhluphekeni okanye kwiintsuku ezininzi zamava. Hayi, ayikho. Wacula ngenxa yokuba wayengalindelanga ukubona umama onjengawo - ediniwe, ompunga, ediniwe kakhulu. Ubomvu obukhulu kwisisu sam ukusuka kwicala ... Kwakunzima ukubona ... Kodwa, ngokubaluleke kakhulu, umama wayephila kwaye ngokuthe ngcembe wayesilungisa. Amaqhosha angapheliyo, iinkqubo ezibuhlungu kakhulu, Nkosi, ubunzima obungakanani umama ahlupheke kuyo, yintoni inamandla engqondweni yakhe kunye nathi esiyidingayo ukunqoba konke oku! Ngoku kukhwankqisa ukucinga ngako.
Ndiyintoni na? Kuze kube sekupheleni kwayo yonke into eyenzekayo, eneneni, andizange ndiyiqonde. Kodwa kwakukho inani lezinto ezihlala zihlala kum memori wam kwaye zandenza ndikhale kude kube ngoku. Ndiza kukuxelela ngenye yazo. Xa ukugula kukaMama kwakusandul 'ukuqala, kwaye yena, ekubeni kwelinye ilizwe, waqonda ukuba akayi kubona kungekudala, waqokelela waza wangithumela iplasela ngezipho ezithandekayo ukusuka kwintliziyo yakhe. Kwakhona wayesazi ukuba akanakuze andibone kwakhona ... Ndibhalela, kwaye ndikhala e mehlweni am. Phakathi kwezipho kwakuyi-dolg edibeneyo, eyayikhethwa ngumama ngokunyanisekileyo. Xa ndibona le doll, intombi yam isondeza ngokukhawuleza ukuba yatshintshele into enayo ... Ndaye ndatshintsha ... Ngomso olandelayo kwafika ukuqonda nokuzisola. Nangona ndandineminyaka emihlanu ubudala. Ewe, ndingathini na ukunika umntu iindaba ezibi kakhulu kumama? Ngaloo ndlela kuphela, xa umama afunyanwa, sahamba satshintshana le doll, kwaye ndisayigcina kunye nxweme.
Kwiminyaka engama-25 idlulile, ngoku yonke into ihamba kakuhle nathi, nangona ubuqhepho obunzima bomama buhleli ngonaphakade, kwaye iziphumo zokugula ezidlulileyo zivame ukuzivezela. Kodwa ebaluleke kakhulu, uyaphila, sihlangene, intsapho yethu ibe namandla kakhulu emva koko konke okwenzekileyo. Ngoku andihlali nabazali bam, ndiba nobomi bam, intsapho yam. Kodwa umama usalindele mna umntu obaluleke kakhulu ebomini, ngokukrakra ndicinga ukuba angasayi kuba kunye nathi, kodwa ke ndiyiqhuba le ngcamango. Emva koko, unathi. Kwaye lo ngummangaliso.
Qaphela abazali bakho, sebenzisa ixesha elininzi kunye nosapho lwakho ngokusemandleni akho, xabisa yonke iminzuzu xa bejikelezile. Enyanisweni, ngelixa besaphila, sinabantu abonwabile ngokwenene, kwaye sinokuba ngabantwana ...
Iintyatyambo endlwini nguFeng Shui
Ingcamango yegama: ukuzinikezela kwi-ballerina kunye nemfihlelo yokubhala
Ukuzinikela kwintliziyo yendoda ...
Indlela yokulahleka isisindo kwaye ungashiyi kwakhona
Iidolli kwi-kapron pantyhose: iklasi yeklasi kunye nevidiyo kunye nesithombe
Jam Imizuzu emihlanu ngaphandle kwe-currant (emnyama nebomvu) - zokupheka ebusika, kubandakanywa. kwi-multivark. I-Jelly emizuzu emihlanu ngaphandle kwe-currant ngokusebenzisa i-grinder yenyama
Izinto zininzi, kodwa akukho nto enxibayo? Iingcebiso ezi-3 ezivela kuma-stylists, ukuba njani
Umzala wakhe onomtsalane omhlophe nohlaza
Indlela yokukrazula i-hangover, iindlela zabantu
Yintoni ekhangeleka njengabantu besifazane?
I-lobster, ingqolowa kunye nesaladi yesaladi
Ukubuyisela ukutshiza kwintsana
Ngaba ngaba besetyhini kufuneka bavezwe?
Iimpawu zeenwele ezihlambululayo: iiprayipi eziphambili zekhaya
Ziziphi iintlobo zezipho amadoda axhaswe ngabantu